Amazon yakasimudza izwi rayo ichipesana nePEDagon's JEDI uye zviri pamutemo inonyunyuta kupokana nesarudzo | Linux Vakapindwa muropa
Amazon yakasimudza izwi rayo ichipesana nePEDagon's JEDI uye inonyora faira kunyunyuta kupokana nesarudzo
Rinopfuura chete mwedzi wapfuura Pentagon yakapa Microsoft kondirakiti Joint Bhizinesi Rekuchengetedza Zvivakwa (JEDI, nhau dzatinogovana mazuva mashoma gare gare pano pa blog (unogona kuzvitarisa Mune inotevera chinongedzo). Chibvumirano ichi chichafukidza matavi ese eUS Army. mune iyo yakajairwa gore nharaunda ichagadzirwa mukati meDhipatimendi reDziviriro. Chibvumirano chemadhora gumi emadhora chinotarisirwa kutora makore gumi.
Makambani akati wandei aibatanidzwa muchibvumirano ichi, yeiyo Google, Amazon, Microsoft (kungotaura zvinonyanya kuzivikanwa) uye kuti pakupedzisira yakaguma iri mumaoko eMicrosoft, sarudzo iyo yaisaratidzika semamwe makambani uye yakashorawo Amazon.
Mune chirevo chinopa chibvumirano cheMicrosoft, Ministry yeDziviriro yakati:
"Maitiro ekutora akaitwa zvinoenderana nemitemo nezviga zvazvino." “Zvese (zvinopihwa) zvakabatwa zvisina tsarukano uye zvakaongororwa zvichiteerana nemaitiro ekuongorora akataurwa muchikumbiro chekupihwa.
Vasati vapa mubairo uyu, bazi rakataura naInspector General veDhipatimendi reDziviriro, avo vakazivisa danho rekuti vaenderere mberi,
Microsoft inohwina mega-contract yePentagon gore zviwanikwa (JEDI)
Chibvumirano ichi chakakosha zvakanyanya nekuti zviri pamoyo pekuyedza kwePentagon kuvandudza tekinoroji yayo, nekuti nhasi mazhinji emauto anoshandisa masystem emakomputa kubva kuma80 nema90 nebazi rezvekudzivirirwa akashandisa mabhiriyoni emadhora kuyedza kuagadzirisa.
Asi Sarudzo yekupa JEDI kuMicrosoft maAmazon asati ashamisika zvinopfuura chimwe. Kune rimwe divi, AWS yaionekwa semutungamiriri mukugadzira gore masevhisi eCentral Intelligence Agency uye chechipiri nekuti Amazon yakanga yavimbiswa nechengetedzo rwepamusoro, nepo Microsoft ichinetseka kubata gore komputa.
Izvo zvinofanirwawo kutariswa kuti maitiro ekupa, ayo akareba kwenguva yakareba kupfuura zvaitarisirwa, zvakare, pamusoro pekuve nekupindira kubva kuWhite House, sezvo vazhinji vachiziva, Mutungamiri Trump agara achiratidza kuvengana kwake naJeff Bezos., CEO yeAmazon.
Amazon yakafunga kumhan'arira Pentagon. Kambani iyi inoti "kusarongeka pasina tsarukano" kubva kuhurumende pakupa kondirakiti yakakura mumunda wehunyanzvi hwemauto kuMicrosoft.
Mune chirevo chakaburitswa mazuva mashoma apfuura, Amazon's cloud unit yakati:
"Mune zvakawanda zvehurongwa hwekuongorora kweJEDI vane zvikanganiso zviri pachena, kukanganisa uye kusarura uye zvaive zvakakosha kugadzirisa nyaya idzi"
Iyo kambani yakakwidza mubairo wechibvumirano pamberi peU.S. Federal Claims Court.
Mutauri weAmazon Web Services akadaro kuti kambani iyi "yaive neruzivo uye inokodzera" basa iri, ichiwedzera kuti: "Isu tinotenda zvakare kuti zvakakosha kunyika yedu kuti hurumende nevatungamiriri vayo vakasarudzwa vabate zvine chinangwa uye vasina simba rezvematongerwo enyika".
NeChishanu, kambani yakakwidza nyaya mudare remubatanidzwa (iyo United States Dare reFederal Claims). Dare iri rine masimba akakosha: Simba guru redare iri pa28 USC § 1491, inozivikanwa seTucker Act. Pasi pemutemo uyu nemimwe mitemo yakapihwa neCongress, unogona kunge uine zvikumbiro zvakawanda zvinopesana nehurumende yemubatanidzwa, kusanganisira zvibvumirano zvebvumirano, kupihwa, zvirevo zvemubhadharo wemauto, zvikwereti zvemubhadharo wehurumende, zvirevo zvemitero, zvirevo zvekukuvara kwejekiseni, uye zvirevo zvepamutemo.
"Rekodhi yedambudziko iri rinogona kunge riine ruzivo rwakanyanya," akawedzera nyanzvi.
Vhiki rapfuura, Secretary of Defense weUnited States, Mark Esper, akaramba chero zano rezvematongerwo enyika muPentagon sarudzo kupa chibvumirano kuMicrosoft mushure mekunge Amazon yazivisa chinangwa chayo chekupokana nedare redzimhosva.
"Tinotenda kuti chokwadi ichi chinoratidza kuti ivo (Dhipatimendi reDziviriro) vaita hurongwa hwakadzama, hwakazara uye husina tsarukano hwekuona kuti Microsoft inonyatsoita zvinodiwa nemurwi," akadaro Microsoft muchitaurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Amazon yakasimudza izwi rayo ichipesana nePEDagon's JEDI uye inonyora faira kunyunyuta kupokana nesarudzo
Dambudziko rezvirongwa gumi nemaviri. Kutanga gore nekuisa zvirongwa iwe zvausingazomboise
Iyo nyowani vhezheni yeVhura CASCADE 7.4.0 iri pano, yejometri modelling SDK